Okhethekile uJo Nesbø. Ngomdali kaHarry Hole eMadrid. Okuvelayo | Izincwadi Zamanje
Okhethekile uJo Nesbø. Ngomdali kaHarry Hole eMadrid. Okuvelayo
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Izingxoxo, Abalobi, Imicimbi, Amabhuku, Izaziso, Inoveli emnyama
Izithombe zika (c) Mariola Díaz-Cano kanye (c) neGetafe Negro
Jo Nesbo ngabe kulezi zinsuku ku UGetafe Omnyama, in yakhe Uhlelo lwe-XII lokho kuvaliwe izolo futhi lokho kuye kwaba njengezwe lezivakashi ENorway. Umbhali ohlonishwayo we inoveli emnyama, baba ukhomishani UHarry hole, wabamba iqhaza ezenzweni eziningi ku Izinsuku ezi-3 nesithangami nabezindaba kufakwe ukwethula Ummese, incwadi yakhe yakamuva, kanye nemihlangano embalwa nabafundi. Le nto ekhethekile eyami ukulandelana kwezikhathi okuvamile futhi yami ukubonakala okuthe xaxa ngaye, ngaphandle kokungabaza omunye wabalobi bami abakhonzwa kakhulu. Ungaphuthelwa.
1 23/10/2019 - UJo Nesbø noLorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
1.1 Izinhlekelele nokunqoba, uMark Twain, ifilosofi, ama-psychopaths futhi "yebo, ngike ngathatha izinto ukubhala."
1.2 Imibuzo nezimpendulo
2 24/10/2019 - Ingqungquthela yabezindaba nokukhuluma e-Espacio Mercado (Getafe)
3 25/10/2019 - Umhlangano ePedro Salinas Library
3.1 Izikhathi Ezihlekisayo - Ubuso bukaHarry Hole
3.2 Amasiginesha amaningi nokuhlelwa kokuhlela ezincwadini eziningi zeNesbø
4 25/10/2019 - Ukuhlangana nabafundi nokusayina eCasa del Libro
5 Ukuvela kwami ​​ngoJo Nesbø - I-charisma yokulula
23/10/2019 - UJo Nesbø noLorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
Izinhlekelele nokunqoba, uMark Twain, ifilosofi, ama-psychopaths futhi "yebo, ngike ngathatha izinto ukubhala."
Esikhathini esiphithizelayo ihholo leMutua Madrileña Foundation le ngxoxo yenzeke phakathi kukaNesbø noSilva mayelana isimo somuntu kule noveli yobugebengu. Ihora nekota ongayibona lapha kufakwe nezimpendulo zemibuzo evela emphakathini. Vele baxoxa ngokufakwa kwamuva kochungechunge lwabo lweHarry Hole, Ummese, kepha futhi mayelana ne classical inhlekelele base lokho kukikho konke.
Lokho bekungaba yi umzuzu ofanele kakhulu noma obucayi lapho uNesbø aphikisana khona kanye nomphathi omkhulu njengoLorenzo Silva ethonyeni lenkolo nokuziphatha emphakathini wanamuhla. Futhi bagcizelela amandla we amandla nokuhlangenwe nakho okungekuhle (ukwehlula kanye Umdlalo) lokho kuhlala kuvame ukunqoba okuhle (ukunqoba kanye injabulo) ngoba umbono mayelana nokugcina kuyinto - noma kubonakala sengathi- mfushane.
Lokho kugqama yikhona okugqame ku- ingqikithi yesimilo sakhe nempilo yakhe eqanjiwe, osevele enayo on track for an ukuphela lapho kungenzeka ukuthi iphoyisa lakhe ebelishaywe kakhulu kungenzeka liguge (kulesi sitolimende sakamuva uHarry Hole usevele uthanda ama-50). Y ngalokho kudalwa kufanele futhi ihlale iqotho ezimisweni zayo futhi angazizwa enesimo por ukuthi bacabangani noma bangabuza ini abafundi bakho.
Amazwana anamahlaya anele - amaNordic, kepha ihlaya - aya embuzweni kaSilva mayelana banani ababhali baseScandinavia jikelele ngempumelelo abayizuzile. Lapho uNesbø wabeka ithoni ebucayi futhi waphendula ngokuthi bonke bahlangana kanye ngonyaka uku hlela ukunqoba umhlaba.
Eminye imibuzo yayikhona mayelana nokufundwa kwakho, okuyizinhlobo zonke, kepha manje esigxile kakhulu ku- ifilosofi ngoba indodakazi yakhe iyamfundela (wayeze naye eMadrid kodwa wayengekho lapho). Noma yizo ezamthinta kakhulu ngenkathi esemncane, okwakungukuthi UMark Twain -Tom Sawyer nokuzidela kuka Huckleberry uFinn-.
Kwakumnandi uma kwenzeka wayenokuthile ukubhala. Uthe yebo, yize engashongo ukuthi, ukuthi waqala ukubhala ukuze abone ukuthi kwakunjani, nokuthi ngakusasa ekuseni okwakuphume kwaba ngu udoti wangempela. Enye enhle kwakungeyakhe isenzo sokungabaza futhi sifushane "yebo" uma kukhona okuhle okuzokwenzeka kuHarry ngezikhathi ezithile. Futhi okunye mayelana nokwakhe umbono mayelana inguqulo ehlulekile cinematographic of Umuntu weqhwa.
Inkulumo iphele ngempendulo yokugcina komunye u-yebo Unokuthile kwe-psychopath, lokho futhi bekunguye "yebo" yize kufaneleka ukuthi kukhona eminye imisebenzi ethambekele kakhulu kuma-psychopathies.
Isenzo sigcine ngo- injabulo enkulu bese kuba khona i- isiginesha emfushane nabanye abafundi abaphethe noma abanezincwadi. Y uma kufanele ubeke kodwa bekuyiso leso sikhathi. Mhlawumbe umphakathi noma kubonakala sengathi kuhambile ngu-Lorenzo Silva noma bengazi okuningi ngeNesbø. Futhi ake sithi iminyaka yobudala neso lami elibukhali njengomfundi walolu hlobo nalombhali othile akuhlanganisanga okuningi.
Noma mhlawumbe, besingalindele kanjani leso siginesha (okuyinto uSilva amemezele futhi wacela ukuthi ingabi yinde kakhulu, kepha uNesbø uphawule wathi akanankinga nokuthi uzothatha nezithombe), umugqa owakhiwe Kwakungekho ngaye ngqo, kepha buyisela amahedfoni ngokuhumusha ngasikhathi sinye. Ngakho-ke bekukhona ifayela le- umzuzu wokushoda, kodwa ukuthi abalandeli bokuqina kakhulu bangathatha ithuba lokumbingelela nokuma naye.
24/10/2019 - Ingqungquthela yabezindaba nokukhuluma e-Espacio Mercado (Getafe)
Kwakuyihlazo ukungakwazi ukuzibandakanya mathupha, kodwa akazange anginike isikhathi sezinto ezibonakalayo. Ngakusasa ekuseni uNesbø ubenikeza isithangami nabezindaba e Ihotela le-Iberostar De Las Letras, okubikwa kabanzi kwabezindaba. Futhi ntambama wabamba iqhaza ku- itafula eliyindilinga mayelana Nordic News usevele useGetafe Market Space, futhi noLorenzo Silva nesizwe sakhe URuth Lillegraven (umbhali we Ku-fjord ejulile) nesi-Icelandic URagnar Jónasson (Isithunzi sokwesaba).
25/10/2019 - Umhlangano ePedro Salinas Library
KungoLwesihlanu ekuseni uJo Nesbø ubehambele umhlangano nabafundi e "I-Pedro Salinas" Isikhungo Somtapo Womphakathi Yini umbhali ayethule? U-Anamaria Trillo. Kwakukhona nomhleli weReservoir Books kanye nenhloko yezindaba nokuxhumana kweRamdon House, ngaphezu kwe ukuhlanganiswa kwamasiko kusuka embasi ENorway, okuyi- futhi umhumushi we Ummese.
Kwakungu- imvelo okuningi esiseduzane, yize futhi esikhathini esincane. Kepha isetshenziswe kahle kakhulu ikakhulukazi kumjikelezo we imibuzo nezimpendulo kumbhali, lokho futhi kwakumayelana naye isiphetho sikaHarry Hole. Futhi mayelana isihloko asithandayo kakhulu salolu chungechunge, okuyi URobin, ngokubandakanya okwenzeka emndenini wakhe, ikakhulukazi ubaba wakhe.
Izikhathi Ezihlekisayo - Ubuso bukaHarry Hole
Kade kukhona ezinye, njengalapho evuka nebhokisi le- ushokoledi ukuthi wayenakho etafuleni futhi wayefuna ukuwabelana nawo wonke umuntu. Noma izimpendulo zemibuzo nemibono embalwa futhi nge-movie.
Futhi ukuthi umsizi uphawule ukuthi ubengathandanga lutho noma kungenxa yokuzivumelanisa nesimo noma ngenxa ye- ukufana okungabonakali komzimba lomlingisi Michael Fassbender njenge-a Harry ukuthi bonke abafundi bakho bazi ukuthi kuyalinganisa 1,94, uyimpandla blonde futhi cishe ngaso sonke isikhathi kuyanela UDoc Martens. Ngakho-ke wabeka amazwana ngokuncokola - okungenani babekwazi ngibeke lawo mabhuzu. Ahleke uNesbø futhi, futhi ngokubhuqa kweNordic, ukuphendule lokho umbuzo (uqonde kangcono umbhedo) Kwakungekhona ukuthi babeka amabhuzu noma cha yize ewuncoma umsebenzi kaFassbender nawo wonke umuntu ngokujwayelekile.
Kwakukhona lapho ngingena, que ngine isikhathi eside umuntu ozongenela ukhetho, ihlukile futhi ayidluliseki, okungukuthi, njengesithombe sikaHarry kumfundi ngamunye. Eyami ngeyomlingisi owaziwayo oqhamuka kulawo mazwe, UTrond Espen Seim, idatha engiyitholile kangcono Ukugqamisa kweViking / Anglo-Saxon ukuthi uMnu Nesbø ukwazile ukuqaqa ekugcineni. "Ah, yebo, umlingisi waseNorway, yebo, yebo ...". Isimanga, ikakhulukazi kimi, ukuthi wayelokhu ebala i-anecdote lokho kungenze ngafinyelela eValhalla engiyifisa kakhulu:
"Uma kuyiqiniso, igama lakhe laxutywa, kodwa ngaphambi kwalowo msebenzi. Ungumuntu omude (cishe u-1,90 futhi manje usephenduke u-Okthoba 48) futhi, muhle futhi. Futhi Igama lami ngu ngolunye usuku ngoba sinomngane esifana naye. Ngangisendaweni yomphakathi, nginempilo enkulu kulokho engakuzwa ngemuva, futhi wangitshela ukuthi uyangifunda futhi ufuna ukuba nguHarry Hole. Ngamtshela ukuthi kulungile, kodwa yini uma enesiqiniseko sokuthi angaphuza ngokwanele noma kakhulu njengoHarry. Wabe esengiphendula: «Awu, angazi, kodwa ngoNkulunkulu ngiyazama"".
Amasiginesha amaningi nokuhlelwa kokuhlela ezincwadini eziningi zeNesbø
Umcimbi uphele ngemikhonzo kanye namasiginesha athe xaxa kwabahambele lo mcimbi. Omunye wayephethe izincwadi zakhe eziyi-12 ochungechungeni olwasayinwa ngesineke nguNesbø.
Bengikhuluma no UJaume Bonfill, wangiphendula zizoshicilelwa nini izihloko zeNesbø ezingekho: Igazi eqhweni (Igazi eqhweni) futhi Ilanga laphakathi kwamabili (ILanga Lamaphakathi nobusuku), okuye kwaba ngezinye izilimi isikhathi eside. Ukuthi bengivele ngiwafundile, amafushane futhi, yize kusuka ezindabeni ezizimele kuya ochungechungeni lweHole, nawo futhi kuhle kakhulu, njalo phakathi umbono wami othobekile.
Yebo, kuqala kuhlelelwe i entwasahlobo ka-2020 futhi i okwesibili ukuze ukuphela kwalowo nyaka. Ngakho-ke ngenkathi silinde isitolimende esilandelayo sikaHarry, sizoqhubeka nokufundwa okuhle kukaNesbø.
25/10/2019 - Ukuhlangana nabafundi nokusayina eCasa del Libro
Kwakuyi isenzo esiseduze. Ngabanqobi abahlanu, zivela kulo lonke elaseSpain, yemarathon yokufunda obizwe ngesonto eledlule ngumshicileli. Futhi nge amalungu ambalwa we- Uboshwe kuJo Nesbø (Ngizibheka njengoyidalile, kunjalo) ngenhlanhla enkulu ukumenywa.
Umphumela umhlangano okhululekile futhi muy cómodo. Ngezwi, imibuzo nokuphawula, futhi ikakhulukazi yi indlela eqonde ngokwengeziwe lapho uNesbø ephendula khona konke.
Ukusuka ezincazelweni zakhe kuye kungani amanye amathumbu ku Ummese, siphawula ini ngaphandle kokuziveza nhlobo ngoba abanye bebengakaqedi ngayo. Ukubuyiselwa kwakhe kabusha ku- ungathonywa yile mibono, iziphakamiso noma ukuqina kwabafundi bakho ngaphambi kwesiphetho salo mlingiswa noma omunye. Nokugcizelela kwakhe lokho inqubo yenqubo yokudala Kusho ukuthini ukukuyisa kulokho isimo que mhlawumbe uke wacabanga noma cha, kodwa njalo ngaphandle kwakho ukuqaphela. Noma kunalokho, ukuthi uyaxwayisa ukukhwabanisa kepha futhi njalo ukuthatheka uwe kuwo.
Konke kwenzelwa ini, lapho uthola lezo zindawo, bakumangaza ngezinga elifanayo nokuthi uyaziqonda Futhi ungakugwemi ukuthi, "O impela, kuliqiniso." Ngokushiya nokwamukela, kepha futhi nangomoya we sikujabulele okuhle noma okubi.
Sikwazile ukuxoxa naye, wasibuza ukuthi sivelaphi futhi waphawula ukuthi uvame ukuyikhumbula kanjani imininingwane ngaleyo ndlela azisize ngayo webhola, Ngokwesibonelo. Ah, lokhu kusuka kusayithi elinjalo, njengoba ungaba ngumlandeli weqembu elinjalo ... jugador uchwepheshe kuye ubusha kuze kube imisipha 19 iminyaka.
Imibuzo yami embalwa ithi yebo umculo awulalelayo noma awuthandayo (uyadlala, aqambe futhi acule eqenjini lakhe Ithi derre) futhi ekaHarry. Uphendule kanjalo Yebo babelana kakhulu, yize ayezisola ngokuthi uHarry wayengalithandi iqembu lakhe. Futhi wahamba buthule kancane nge "Angisoze ngakulalela" nini Sikunxusa ukuthi uqhubeke ngokulandelayo kukaHarry ngoba angeke asishiye ngaleso siphetho se- Ummese.
Konke kwaphela ngemuva amasiginesha nezithombe nathi sonke esasilapho, noma ngabe sasikhona umphakathi omncane, iqiniso. ICasa del Libro eGran Vía isitolo esihamba phambili eMadrid, Pero indawo emiselwe kulezi zenzo futhi, ngaphezu kwakho konke, lapho ikanye nabantu abasezingeni elifanele leNesbø, akuyona i-lucid kakhulu. Ngaphezu kwalowo mphakathi omncane kwakukhona. Futhi isikhathi besingafanele kakhulu, kepha ajenda UMnu. Nesbø's wayekhona eziyinkimbinkimbi. Ngakho isinxephezelo kwaba yilokho kusondelana ukunethezeka naye.
Ukuvela kwami ​​ngoJo Nesbø - I-charisma yokulula
Dicen que emabangeni amafushane yilapho ungabazisa kangcono khona abantu. Futhi futhi lokho akufanele neze uthembe ukubukeka. Ngokuyinhloko kunjalo. Kulokhu, noma kunjalo, i- izici ngaphezulu siqu. Futhi kucaciswa ngokuqondile: okwami.
Awufiki kuJo Nesbø namanoveli akhe lapho uneminyaka engama-20. Futhi akufani nabangama-30. Bengivele ngigcwalisa ezahlukahlukene ezingama-40 lapho ngathola. Kufanele uqale kabusha njengomfundi ngokujwayelekile futhi inoveli yobugebengu ikakhulukazi. Ngoba kufanele ube nokuningi i-gasket, amathumbu, izinzwa zensimbi namandla okukhuthazela ama-epic ukuma ngaphambili, noma kungokomfanekiso, wesilwane esibhaliwe njenge UHarry hole.
Kodwa ingabe lokho UHarry ukhona futhi usevele ungumngane wethu, akukho okunconyiwe, yebo. UNesbø usevele washo kaningi: "Ungomunye walabo osebenza nabo ohamba nabo ngempelasonto kodwa ngoMsombuluko awusababizi." Futhi ngenxa yalesi sizathu sinomuzwa wokuthi siyamthanda, siyamzwela futhi simzwele kakhulu.
Izinto eziningi zazisele kwipayipi ukutshela, kunokuba ubuze, kuNesbø. Enye bekuwukuthi uma ukwazi lokho, hhayi njengamanje ngemuva kokufunda Ummese kepha kudala ngaphambi kwalokhu, isidalwa sakhe simdlile. Ngoba inakho. Ngamandla alo okuheha, ukuheha nokulutha. Ngenxa yama-hangovers angokomzwelo asishiyela wona njalo lapho sifunda esinye isiqephu esibi njengoba sinobuciko empilweni yakhe yamanga kodwa yangempela. OKwenzeka kanjani? kwezinye izimo, ngoba lapho abafundi abaningi que bayamkhomba njengoHarry. Futhi i- Ngiyakuthola. Kungani?
Ngoba kulula kakhulu ukunika uHarry ngobulula bomdali wakhe. Yiyo kanye le ehlinzekayo umdlandla wokuthi banakho bobabili. Futhi ngasikhathi sinye, futhi kukhona umlingo, share futhi a Indida efanayo.
UHarry uyindalo ephelele yokungapheleli komuntu, enemvilophu ebonakalayo enkulu noma ngabe iphepha. Futhi kuvela ukuthi leyo yeNesbø yangempela iyinto ehlukile: intekenteke futhi icishe ingenakuzisiza, sengathi ingaphuka nganoma yisiphi isikhathi nganoma yimuphi umzamo noma ukunyakaza okungazelelwe. Futhi kuyamphelekezela ukubukeka okunamahloni nokungaqondakaliUfuna ukubukisa ngani? kubanda Pero yini edlulisayo imfudumalo uma unayo amasentimitha ambalwa. Njengoba nje yenza ithoni ephansi nehamba kancane yalelo lizwi lemisindo ezilimini zalezo zingxenye.
Konke kubukeka njenge- iqoqo lezinhloso zokuzama ukungabonakali. Kepha thola okuphambene: ngikubambe ngaleyo ndlela elula iguquka ibe ubuciko namandla angenakuqhathaniswa ukudala indawo yonke, izindaba nezinhlamvu ezihlukile. Umuntu othile oqanjiwe njengoHarry Hole ukwazile ukuphuma engqondweni efana noJo Nesbø's. Lokho kusho, akekho omunye ngaphandle kukaJo Nesbø owayengayiqamba. Kodwa noma uhlanya udokotela proctor, noma umphindiseli indlalifa njengoSonny Loftus nama-antiheroes athandana kakhulu njengo-Olav (Igazi eqhweni) noma uJon (ILanga Lamaphakathi nobusuku). Noma kunjalo zenzele abalingiswa basenganekwaneni bathanda Macbeth.
Umlingo nokuphumelela kufanele ngikwenze, ikakhulukazi ngaleyo nhlekelele futhi ngishayiwe, kepha angakahlulwa, iphoyisa elidakayo, ukuze mangaza abafundi abaningi emhlabeni wonke. Uma kunjalo izindaba zomhlaba wonke ukuthi sonke siyabona futhi sabelane ngaso, kepha kufanele wazi ukuthi ungazibala kanjani. Noma kufanele ubatshele ngendlela enza ngayo. Ngalokho kubukeka okupholile nalokhu ubuqili obukhohlisayo ngokomzimba.
Ngoba konke endaweni yonke uNesbø ukugcizelela ngomsebenzi omuhle ophansi. Vele, ake sibheke ukuthi uyakwazi yini ukukwenza ngelinye ilanga nalabo bangane ababili athi unabo angakwazanga ukuhlangana kuze kube manje.
Ngifuna Bonga UGetafe Omnyama, ukhomishani wakho ULorenzo Silva nabaphathi be-RRSS, ukuze Izincwadi Zedamu, umhleli wayo, uJaume Bonfill, kanye nethimba le- marketing nokuxhumana kwe Indlu Engahleliwe (Ngiyabonga njalo ku-Eva Cuenca). Futhi nenkonzo yokuhumusha, kanye nabasebenzi be Indlu yencwadi. Okwakhe qaphela, umusa nokuthi kulula kanjani ukuthi benze konke ukuhlangana noMnu Nesbø.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Okhethekile uJo Nesbø. Ngomdali kaHarry Hole eMadrid. Okuvelayo
Umlando ophelele ohlanganisa zonke izici zenhlangano kanye naleyo ngxenye ecace kakhudlwana eyimizwa nemizwelo uMnu Nesbø ayishiya ngemuva.
Ngiyithandile leyo ncazelo "yobuqili obungamanga" ukubhekisa kuleso silwane sezinhlamvu esenziwa uJo wethu esenziwa isithixo.
Ukuba nekhono lokudala uHarry (futhi ikakhulukazi ukuhlala naye iminyaka eminingi kangaka) kusho amandla angaphakathi emvelo, yebo mnumzane ...
Ngiyabonga uMariola, ngokusenza sihlanganyele kancane kuleso naleso sikhathi esasihlala eGetafe Negro nothisha omkhulu.
Njengoba usho, awufinyeleli kuma-20, noma ama-30 ... kepha uma ufika lapho awusoze wahamba.
Kimi, ukuzwa lokho kusondela eduze, ngokwabelana ngomphefumulo kaHarry Hole kanye nokujabulela intambama engingasoze ngiyilibale nawe, kuzoba njalo kokunye okuvelele empilweni yami.
Ugh, Arantxa, kumzwelo wami ngamazwi akho. Ngomoya walezi zinsuku engizazi kahle, ngingakutshela nokuthi kunezikhathi ezinjengalezi ezenza lempilo ibe yinhle, ake sithi kunondindwa okujwayelekile. Futhi ngemuva konyaka omubi kakhulu engake ngangena kuwo, le mizwa iyona engcono yokulungiswa. Ngakho-ke ngijabule kakhulu ukuthi lo mzuzu othile sihlangane futhi sabelana ngawo. Ngethemba futhi kukhona okuningi. Ngiyabonga.
Umlando ophelele ngokweqile. Kube yintokozo ephelele ukukufundela nokukwazi ukuhlanganyela, ukude, kulo mhlangano omuhle kangaka. ♥ Siyabonga isigidi. 😘
UWilliam Shakespeare uyadlala
U-Alfonsina Storni, isithonjana se-postmodernism yase-Argentina. 3 izinkondlo